Nepse Online बाफ रे बाफ ! स्कुल ब्यागको भारी – nepseonline
Thursday 05-26, 2022, 10:23 pm
जेम्स तुलाधर यो वर्ष विदामा बुबासँग नेपाल घुम्न आएको छ। बहिनी टिफनी पनि सँगै छिन्। उनीहरु दुवै नेपाली बोल्न जान्दैनन्। तर, आमा बुबासँग सँधै देश विदेश घुमिरहने भएकाले यहाँको माहोलमा घुलमिल गर्न उनीहरुलाई असहज छैन। जेम्स लण्डनमा बस्छन। मेरो छोरा अभिनव भन्दा जेम्स एक वर्षले मात्र कान्छो छ, उमेर एघार वर्षमात्र। पहिलो भेटमा छोराले जेम्सलाई तिमी कति कक्षामा पढ्छौ भनेर सोध्दा ऊ अलमलियो। क्लास! सेक्सन! सोध्दा उसले केही बुझेन। उसको बुबाले बुझाए पछिमात्र बुझ्यो।
उसले भर्खर सिस्थ लेभल पास गरेको रहेछ। यहाँसम्म त ठीकै थियो। तर अभिनवको स्कुल जाने झोला देखेर जेम्स छक्क पर्यो। उसले झोला उचाल्न खोज्यो, अलिकबेर बोक्यो पनि। अनि फ्यात्त भुईंमा झार्यो। उमेरमा सानो भए पनि जेम्स हृष्टपुष्ट छ, अभिनवको तौलको झन्डै दोब्बर। तर पनि उसलाई अभिनवको स्कुल ब्याग बोक्न हम्मे पर्यो।
तिमी यत्ति धेरै किताब कापी बोकेर कसरी स्कुल जान्छौ? जेम्सले अचम्म मान्दै सोध्यो। अभिनव हाँस्यो मात्रै। जेम्सको कौतुहलता मेटिएन। उसको कौतुहलता देखेर अभिनव अचम्ममा पर्यो। ‘तिम्रो स्कुल ब्याग गह्रुँगो हुँदैन?,’ अभिनवले सोध्यो। जेम्सले ‘नो’ भन्दै टाउको हल्लायो। ‘होमवर्क नि?,’ अभिनवले फेरि सोध्यो। जेम्सको जवाफ थियो, कहिले काहीँ मात्रै हुन्छ, त्यो पनि क्लासमा नभ्याए। जेम्ससँग छुट्टिएपछि अभिनवले मसँग सोध्यो, ‘बाबा हाम्रो स्कुल ब्याग किन गह्रुँगो? हामीलाई किन सधैँ यत्ति धेरै होमवर्क?’
वास्तवमै कति गह्रौ रहेछ त छोरी र छोराको स्कुल ब्याग? मलाई तौलिन मनलाग्यो। एक दिन स्कुल जाने बेला घर नजिकैको पसलमा गएर पहिले छोरीको ब्याग डिजिटल तराजुमा राखें। झण्डै सात किलो थियो। अनि छोराको ब्याग जोखेँ। साढे पाँच किलो। बाफ रे बाफ!
यी कलिला छोराछोरी दिनहुँ यत्रो भारी बोकेर स्कुल आउने जाने गर्दा रहेछन्। स्कुल जाने बेला सधैँ हातमा दुई तीनवटा किताब र कापी बोकेको देखेर एक दिन मैले छोरीलाई गाली गरेको थिएँ, ‘किताब ब्यागमा नराखेर किन बोकेकी?’ छोरीले झर्किएर उत्तर दिएकी थिई – ब्याग कस्तो गह्रुँगो छ!
सधैं कुम दुख्यो भन्ने, स्कुलबाट फर्किंदा थकित हुने, अनि केही भन्दा झर्किने त बानी नै परिसकेको थियो। कारण बुझ्न मलाई समय लागेन।
कूल आठ विषय। हरेक विषयका दुईवटा कापी। मोटा मोटा किताब। किताबको आकर्षक गाता माथिबाट स्कुलको नाम र लोगो अंकित अर्को ज्याकेट। यी सब अटाउने ब्यागको आकार कतिपय विद्यार्थीको ढाड भन्दा ठुलो हुने रहेछ। निजी स्कुलहरुको शैक्षिकस्तरको प्रतिस्पर्धा, पात्रो पूरा गर्नैपर्ने होड, अनि पुस्तक पसलेसँगको साँठगाँठमा हुने व्यापारिक फाइदाका लागि साना बालबालिका भरिया बनाइरहेका त होइन? अझ बीच बीचमा व्यावसायिक शिक्षा, पोर्टफोलियो, स्पोर्टस के के हो के के? थपिने सामाग्रीले उनीहरुले बोक्ने तौलको मात्रा झनै बढाउँछ। दैनिक बोक्नुपर्ने यो भारीका कारण थाकेको र गलेको बाल मस्तिष्कले के सिक्छ, के बुझ्छ?
एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले विद्यार्थीले बोक्ने झोलाको तौल बच्चाको तौलको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुनुहुन्न भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनले ६८ प्रतिशत बालबालिका अधिक तौलको झोला बोकेर विद्यालय जाने गरेको पनि पत्ता लगाएको छ।
बालबालिकाको मेरुदण्ड कलिलो हुन्छ। बढ्ने उमेरका बालबालिकामा लादिने अत्यधिक भारले मेरूदण्डको विकासमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ। साथै भविष्यमा ढाड, कुम, गर्दन दुख्ने सम्भावना बढ्छ। हालै अष्ट्रेलियामा गरिएको एक अध्ययनले स्कुल व्यागको अधिक तौल, बोकिने समय, स्कुल पुग्ने दुरी र माध्यमका कारण साना बालबालिकामा गर्दन दुख्ने समस्या बढेको पत्ता लगाएको छ। हामीकहाँ यस्ता अध्ययन भएको पाइँदैन तर हाम्रा बालबालिकाले पनि भोग्ने समस्या यिनै हुन्। तौल प्रतिशत मापदण्ड र विद्यार्थीहरूले भोगिरहेको समस्याका बारेमा हाम्रा विद्यालय संचालक, शिक्षक र सरकार कोही पनि जानकार भएको देखिँदैन। न कसैले वास्ता नै गरेको छ।